Ungayidla Kanjani i-Gourmet Pretzel? | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 18, 2007 NgoLwesine, ngo-Okthoba 18, 2007 Douglas Karr
NgoLwesibili ngithathe uhambo lwesishingishane ngisuka e-Indianapolis ngaya eTampa e-Atlanta futhi ngabuyela e-Indianapolis. Sasingekho isikhathi sokuvakashela abangane noma umndeni (angizange ngibafonele ngibatshele)… umhlangano nje ngibuyele emoyeni. Izindiza zethu zenziwe nge I-Airtran futhi ngamangala kakhulu.
Mhlawumbe ingxenye enkulu yendiza ibifinyelela phansi esikhwameni sami esincane sama-pretzels wokuncoma futhi ifunda iphakethe:
Ngingumkhangisi wokukhangisa ngobuhlakani futhi ngathola ukukhahlelwa kulokhu!
Tags: 2011I-blogworld expoblogworld los angelesibha ephezulu ye-wordpress
Bheka lo Mncintiswano: Wina iMac kusuka ku-DevDad!
Okthoba 19, 2007 ngo-8: 42 AM
Uyadlala! Ingabe leli yiphakethe elibucayi ???? Ingabe bafuna ukuthengisa? Empeleni iyamangalisa futhi ebusweni bakho ... Ngiyayithanda… .kodwa angikholwanga lapho ngiyifunda.
I-Oct 19, i-2007 ku-2: i-56 PM
LOKHO kuyamangalisa. Ngingu-sucker, nami. Ngangidla isikhwama b / c nje wokupakisha futhi angizithandi ngisho nama-pretzels.
I-Oct 20, i-2007 ku-1: i-49 PM
Kuwukukhalipha, ngizobanika lokho, kepha ohlakaniphile abakhokhi izikweletu. Kazi kukhiqiza ukubhuka yini.
I-Air Tran inesakhiwo semakethe / somzila esenziwe kahle, ngakho-ke kungaba ngumzamo nje wokufinyelela kumakhasimende, kunokuba kube ngumzamo wokukhiqiza ibhizinisi.
I-Oct 20, i-2007 ku-9: i-18 PM
Cabanga ukumangala kwami ​​lapho ngibona okuthunyelwe kwakho kunesithombe sesikhwama sama-pretzels engisanda kusidla ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngendiza esuka e-Ohio eya / isuka e-Orlando, Fla! Ukukhangisa okumangalisayo, akunjalo?
Empeleni, lokhu okuthunyelwe kwakuyizaba ezinhle zokukubhalela umbono ngoba ngazama ukusebenzisa ifomu lakho lokuxhumana ukukubuza ukuthi kungani ngingahle ngibe nenkinga ngakho kubhulogi yami. Ngicele abantu abaningi ukuba bangithumelele umyalezo wokuhlola besebenzisa ifomu lakho kepha akusebenzi ngasizathu simbe. Akuzi ku-imeyili yami.
Ukuphela kwento engingayicabanga ukuthi i-imeyili engiyibeke efomini lakho lokuxhumana yi-imeyili efanayo engiyisebenzisa kuphaneli yami yomlawuli. Kungaba yisizathu leso?
Njengoba ungaphendulanga umyalezo wami ngefomu lakho lokuxhumana, ngiyazibuza ukuthi ngabe kukhona yini inkinga ngalo kunoma ngubani, kufaka phakathi nami oyisebenzisayo.
Okthoba 23, 2007 ngo-7: 29 AM
Angiqiniseki ukuthi inkinga ingaba yini. Ngithumele i-imeyili ngokusebenzisa ifomu lami lokuxhumana nekhasi olithumela kulo. I-plugin isebenzisa amandla wemeyili weWordPress ngakho-ke kufanele ukuthi ithumele umyalezo njengoba nje ibhulogi yakho ibizokwenza.
Okthoba 23, 2007 ngo-7: 49 AM
Ngenze njengoba ucelile futhi ngagcwalisa ifomu lakho lokuxhumana, ngisebenzisa ikheli lami le-imeyili elijwayelekile (stephen (at) sjhopson (dot) com Ngizamile ukukuthinta ngefomu lakho lokuxhumana kodwa angikaze ngizwe kuwe. Kungenza ngizibuze ukuthi ngabe ikhona yini okuthile okungahambi kahle ngefomu lakho lokuxhumana.
Njengoba ngangibhala emyalezweni wami ngefomu lokuxhumana, noma nini lapho ngisebenzisa ikheli le-imeyili elishiwo ngenhla, labo abafuna ukungifinyelela ngefomu lakho lokuxhumana kubhulogi lami abawutholanga umyalezo wabo. Angikaze ngibathole.
Kodwa-ke, lapho ngishintsha ikheli lami le-imeyili laba yi-sjhopson (at) yahoo (dot) com, imiyalezo ngefomu lakho lokuxhumana kusayithi lami ize kahle.
Ngabe ucabanga ukuthi lokhu kuhlangene nokuthi ikheli le-stephen (at) sjhopson (dot) com lisetshenziswa njengekheli le-imeyili lomlawuli? Kungenzeka yini ukuthi lokho kuhlangene nakho?
Ngididekile, angikwazi ukuthola ukuthi yini engivimbela ekusebenziseni ikheli lami le-imeyili eliyinhloko: stephen (at) sjhopson (dot) com njengekheli lefomu lakho lokuxhumana elisebenzisa ukudlulisa imiyalezo.
UDavina K. Brewer
Nov 23, 2009 ngo-6: 49 PM
UDouglas, nami ngathatheka ngabakwa-AirTran pretzels. Indlela nje ehlakaniphile yokugcina ukumaketha, imilayezo yomkhiqizo laphaya.